2BWM, 9WM, AEWM, Afterstep iyo Cajiib: 5 WM oo kale oo loogu talagalay Linux | Laga soo bilaabo Linux
2BWM, 9WM, AEWM, Afterstep iyo Cajiib: 5 WM-yada Kale ee Linux
Sii wadida taxanaheena daabacaadaha Maareeyayaasha Daaqadaha (Maareeyayaasha Windows - WM, af-ingiriisi), maanta waxaan wax yar ka sii ogaan doonnaa kii ugu horreeyay ee 5 WM iyaga ka mid ah, maadaama ay jiraan kuwa badan oo jira.
Daabacaaddan iyo kuwa soo socda ayaa lahaan doona ujeeddada lagu caddeeyo dhinacyada muhiimka ah, sida kuwee ka mid ah firfircoon (shaqeynaya) ama mashaariic aan firfircooneyn (horumarkii ayaa istaagay), nooc noocee ah, maxay yihiin astaamaha ugu muhiimsan, iyo xaaladaha qaarkood, sidee loo rakibay, dhinacyo kale. Intaa waxaa dheer, in loo oggolaado gelitaanka xitaa soo koobid kooban oo isbaanish ah, maadaama inta badan boggooda internetku ku badan yihiin Ingiriisi.
Waxaa xusid mudan in liiska buuxa ee Maareeyayaasha Daaqadaha madaxa bannaan hore loo eegay waxaa laga heli karaa boosteejadeenna soo socota:
Wada jir ah Maareeyayaasha Daaqadda ee ku tiirsan ee a Deegaanka Desktop Gaarka ah. Intaa waxaa sii dheer, daabacaadii hore ayaa sidoo kale waxay siisaa marin u fududaanta dhammaan daabacaadyadii hore ee ku saabsan Degaanada Desktop ee kor lagu eegay.
1.4 Ka dib
"WM si dhakhso leh u sabaynaysa, oo leh khaas ah lahaanshaha 2 gees, oo ku qoran maktabadda XCB lagana soo dheegtay MCWM waxaa qoray Michael Cardell. 2bWM wax walba waa laga heli karaa kumbuyuutarka, laakiin aalad tilmaamaysa ayaa loo isticmaali karaa in lagu dhaqaajiyo, lagu qiyaaso oo kor / hoos loogu socdo. DIGNIIN: WM-kan iyo bakhaarkan ayaa ah tijaabo, 2bwm waxaa kaliya loogu talagalay isticmaalayaasha horumarsan".
Mashruuc firfircoon: Waxqabadkii ugu dambeeyay ee la ogaadey 2 bilood kahor.
Waxay bixisaa shaqeynta "daaqadaha Teleport" ee geesaha, bartamaha iyo in lagu daboolo bartamaha kormeeraha.
Ku dar waxyaabo ka baxsan qalabka kormeerka.
Kuu ogolaanayaa inaad isku dhufato iyo / ama u qaybiso ballaca ama dhererka daaqad 2.
Waxay sahlaysaa in la yareeyo ama la weyneeyo daaqadaha iyadoo la ilaalinayo saamiga dhinaca.
Waxay sahlaysaa in la dhaqaajiyo ama wax laga beddelo daaqadaha laba qaddar oo isticmaale-qeexan.
Waxay ku dhex jirtaa 2 xuduudo si buuxda loo beddeli karo oo muujinaya xaaladda daaqadda.
Waa mid ka mid ah WM-yada ugu firfircoon cabirka iyo isticmaalka xusuusta.
Kuma imaanayso wax baararka ah ama looxyo, laakiin waxay ixtiraameysaa _NET_WM_WINDOW_TYPE_DOCK shaqeynaya ee daaqadaha, wayna iska indho tiri doontaa, sidaa darteed inta badan kumbuyuutarrada iyo hawlwadeennada waa inay shaqeeyaan, sida, Qaahira-dock, fbpanel, hpanel, lxpanel, tint2 , xfce4-panel iyo baararka baararka iyo dzen2.
Si aad u aragto tallaabooyinka rakibidda nooc kasta oo ka mid ah nidaamka karti guji xiga isku xirka. Macluumaad dheeraad ah oo dheeri ah oo ku saabsan WM ayaa laga heli karaa waxyaabaha soo socda isku xirka.
"Maamulaha daaqada X11 ayaa dhiirrigeliyay maamulaha daaqadda Plan 9 8½, oo sidoo kale loo yaqaan rabshad. Waxay bixisaa interface user aad u fudud oo nadiif ah. Waa nooc "guji-ilaa-gadaal". Wuxuu adeegsadaa nidaamka xarfaha 'X11' (taas oo nasiib darro ah macnaheedu waa inaysan jirin wax taageero ah oo loo hayo Unicode)".
Mashruuc aan firfircooneyn: Waxqabadkii ugu dambeeyay ee la ogaaday in kabadan 2 sano kahor.
Ma siineyso kombuyuutarro teknolojiyad ah, u habeyn, xirmooyinka muhiimka ah, taageerada EWMH, ama halabuurka.
Koodhkiisa ayaa dad badani u adeegsadaan inay ka bilaabaan horumarinta maareeyaha daaqada meel hoose.
Waxaa loo qaybiyaa ruqsad ka timid MIT.
Daaqadaha ku-foognaanta (firfircoon) ayaa muujinaya xuduud madow. Iyo dhacdooyinka jiirka iyo kumbuyuutarka ayaa tagaya daaqaddan diiradda saareysa. Gujinta batoonka jiirka bidix ee daaqad aan diirada la saarin (xadka cad) waxay keeneysaa diiradda.
Iyada oo leh badhanka saxda ah meel kasta oo aan ahayn daaqadda diirada saareysa, xitaa daaqad kasta oo aan diirada la saarin, waxay soo bandhigeysaa menu u oggolaanaya waxyaabo kale, bilow xterm cusub, dib u habeyn daaqad, dhaqaaq, xir ama qari daaqad
WM-kan duugga ah waxaa badanaa laga helaa keydad badan oo kala duwan GNU / Linux Distros, magaca xirmo «9wm»Sidaa darteed, waxay kuxirantahay maareeyaha baakadka loo adeegsaday, garaaf ahaan ama terminal, si fudud ayaa loo rakibi karaa. Macluumaad dheeraad ah oo dheeri ah oo ku saabsan WM ayaa laga heli karaa waxyaabaha soo socda isku xirka.
"Maareeyaha daaqada yar ee X11. Ma laha astaamo nifty ah, laakiin waa iftiin ku saabsan ilaha iyo muuqaal ahaan aad u fudud. Ugu dambayntii waa inay noqotaa dhaqancelin wanaagsan oo tixraac ah ICCCM. Dhowr barnaamij oo gaar ah ayaa lagu soo daray si ay ula tacaalaan barnaamijyada socda, u kala wareejinta daaqadaha, iyo falalka kale".
Mashruuc aan firfircooneyn: Waxqabadkii ugu dambeeyay waxaa la ogaaday ku dhawaad ​​15 sano ka hor.
Kuu ogolaanayaa isdulsaarka daaqadaha iyo qurxinta daaqada waxaa kamid ah xuduudaha iyo baarka cinwaanka. Sidoo kale, barta cinwaanka ayaa leh badhan meta ah.
Waxay bixisaa daaqado leh xuduudo "aan waxtar lahayn", raac habka daaqadaha ee "No autoraise", oo ka bilow barnaamijyo adigoo adeegsanaya "aemenu" module.
Waxay ku qoran tahay C, waxay isticmaashaa xaw ama gtk toolkit, waxayna leedahay naqshad qaabaysan oo yar.
Ma lahan Bar Bar, taageero loogu talagalay kombuyuutarro fara badan, Icons Desktop, Wallpaper, Themes iyo suurtagalnimada daaqado kooxaysan.
Waa la isku habeyn karaa iyada oo loo marayo feylka qaabeynta, waa miisaan yar yahay wuxuuna u baahan yahay jiir 3-batoon oo loogu talagalay hawlgalka ugu habboon.
WM-kan duugga ah waxaa badanaa laga helaa keydad badan oo kala duwan GNU / Linux Distros, magaca xirmo "aewm"Sidaa darteed, waxay kuxirantahay maareeyaha baakadka loo adeegsaday, garaaf ahaan ama terminal, si fudud ayaa loo rakibi karaa. Macluumaad dheeraad ah oo dheeri ah oo ku saabsan WM ayaa laga heli karaa waxyaabaha soo socda isku xirka.
"Maamulaha daaqada ee nidaamka daaqada Unix X. Asal ahaan wuxuu ku saleysan yahay muuqaalka iyo dareenka isku xirnaanta NeXTStep, wuxuu siiyaa dadka isticmaala dhamaadka kumbuyuutar joogto ah, nadiif ah oo qurux badan. Ujeedada laga leeyahay horumarinta 'AfterStep' waa in la bixiyo dabacsanaan ku saabsan qaabeynta desktop-ka, hagaajinta bilicsanaanta iyo adeegsiga hufan ee agabyada nidaamka.
Mashruuc aan firfircooneyn: Waxqabadkii ugu dambeeyay waxaa la ogaaday waxyar ka badan 7 sano kahor.
Marka loo barbardhigo WM-yada kale, waxay leedahay adeegsi kheyraad hooseeya, waxayna leedahay xasillooni iyo qaabeyn wanaagsan.
Waxay ku qoran tahay C waxayna isticmaashaa agabka GTK. Sidoo kale, waxay kuxirantahay Perl iyo Imagemagick.
Qurxinta daaqadaha waxaa ka mid ah xuduudaha iyo baararka cinwaanka. Baararka cinwaannada ayaa leh badhanno menu-ka, yareeya, kordhiya, oo xiro. Codsiyada firfircoonna waxaa lagu soo bandhigi karaa bar-hawleedka.
Waxaa ku jira taageerada kombuyuutarro badan iyo wareejinta miisaska iyada oo loo marayo module qaylo-dhaan.
WM-kan duugga ah waxaa badanaa laga helaa keydad badan oo kala duwan GNU / Linux Distros, magaca xirmo gadaal ahSidaa darteed, waxay kuxirantahay maareeyaha baakadka loo adeegsaday, garaaf ahaan ama terminal, si fudud ayaa loo rakibi karaa. Macluumaad dheeraad ah oo dheeri ah oo ku saabsan WM ayaa laga heli karaa waxyaabaha soo socda isku xirka.
"Maamulaha daaqad ayaa lagu dhisay qaab jiilalka soosocda ee qaabeyntiisa aadka loo qiyaasi karo ee X Windows. Waa mid aad u dhakhso badan, la dheereyn karo, oo wuxuu ku yimaadaa liisanka GNU GPLv2. Waxaa badiyaa loogu talagalay adeegsadayaasha horumarsan, kuwa horumariya iyo qofkasta oo wax ka qabta howlaha xisaabinta maalinlaha ah ee doonaya inuu si faahfaahsan u kantaroolo jawigooda garaafka ah.
Mashruuc firfircoon: Waxqabadkii ugu dambeeyay waxaa la ogaaday ku dhawaad ​​2 sano ka hor.
Waa WM dhammaystiran oo xoog leh oo kuu oggolaanaysa inaad u dhexeyso qaab "Tiling" ama "Stacking".
Waxay u oggolaaneysaa xakameyn buuxda jiirka ama kumbuyuutarka iyada oo loo marayo nidaamka wicitaanka ee adeegsadaha isticmaalaha.
Qurxinta daaqadaha waxaa ka mid ah xuduudaha iyo baararka cinwaanka, baararka cinwaankuna waxay leeyihiin astaan ​​iyo badhanno si loo yareeyo, loo weyneeyo, loona xiro. Sidoo kale, geesaha daaqaddu way yar yihiin (qiyaastii 1 pixel ballaaran).
Waxay ku qoran tahay C, waxay leedahay taageero multiscreen ah iyada oo loo marayo xinerama iyo bar desktop-ka ayaa bixisa macluumaad xaalad iyo taageero ah aalado khaas ah.
WM-kan hadda jira waxaa badanaa laga helaa bakhaarro badan oo kala duwan GNU / Linux Distros, magaca xirmo laga cabsadoSidaa darteed, waxay kuxirantahay maareeyaha baakadka loo adeegsaday, garaaf ahaan ama terminal, si fudud ayaa loo rakibi karaa. Macluumaad dheeraad ah oo dheeri ah oo ku saabsan WM ayaa laga heli karaa waxyaabaha soo socda isku xirka.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" kuwan hore 5 «Gestores de Ventanas», kana madax bannaan wax kasta «Entorno de Escritorio»loo yaqaan 2BWM, 9WM, AEWM, Dabayaaqadii iyo Cajiib, noqo mid dan weyn iyo dan u leh, dhammaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » 2BWM, 9WM, AEWM, Afterstep iyo Cajiib: 5 WM-yada Kale ee Linux
Pysa, oo ah falanqeeye joogto ah oo loogu talagalay Python oo ay bixiso Facebook
VeraCrypt 1.24-Update7 wuxuu soo bandhigayaa ilaa 30 isbadal oo kuwani waa kuwa ugu muhiimsan